(17 မဲ, ပျမ်းမျှ: 4.59 ထဲက 5)
က ဂျုံစပါးခြွေလှေ့စက် သေးငယ်တဲ့အရွယ်နဲ့ပေါ့ပါးတဲ့အလေးချိန်ရှိပါတယ်,အိမ်သုံးအတွက်အလွန်သင့်တော်သောအလွန်ရွေ့လျားနိုင်သော,ဒီလိုသေးငယ်တဲ့အိမ်သုံးဂျုံခြွေလှေ့စက် စက် လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ဤအသေးစားဂျုံစပါးခြွေလှေ့စက်သည်ဂျုံစပါးကိုသာလှန်နိုင်သည်,ဒါပေမယ့်လည်းပဲပုပ်ကိုကြိတ်နိုင်ပါတယ်,ဆန်,မုဒိမ်းမှုမျိုးစေ့,နှင့် sorgum,ဒါကဘာလဲ, သင်အဓိကအလုပ်လုပ်ရိုးတံကိုပြောင်းလဲလျှင်(roller) ဂျုံခြွေလှေ့စက်သည်ပြောင်းဖူးကိုလဲကျနိုင်သည်,စပါးခြွေလှေ့စက်တွင် multifunction. ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အရာသည်ဂျုံမှုန့်များနှင့်ဂျုံမှုန့်များကိုပြုပြင်နိုင်သည့်လေပန်ကာတစ်ခုရှိသည်။ လေစီးဆင်းမှုကိုချိန်ညှိနိုင်ပြီးစပါးနှင့်သန့်ရှင်းစွာခွဲထုတ်နိုင်သည်။ ဆန်ခြွေစက်ကိုပေါင်းစပ်ထားသည် စပါးကိုနိုင်အောင်သီးခြားလှိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်, ဂျုံဖွဲ, ဂျုံကောက်ရိုးသည်တစ်ချိန်ကဤဂျုံစပါးနယ်လှည့်စက်ကိုခွဲထုတ်ပြီးရှင်းလင်းလိမ့်မည်,ငါတို့လည်းရှိသည် ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့ နှင့် ပြောင်းဖူးအခွံစက်.
1.ဆန်ခြွေလှေ့စက်တွင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးရှိသည်,သိပ္ပံနည်းကျဒီဇိုင်း,ဒါကဘာလဲ,စက် Anti- အက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်,သံချေးဆေး,နှင့်ရေစိုခံ,လွယ်ကူသောရွေ့လျားနိုင်သည်,
2.ဂျုံစပါးခြွေလှေ့စက်သည်မြင့်မားသောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊,ဆန်အတွက်အကောင်းဆုံးလည်း,ပြောင်းဖူး, မုဒိမ်းမှုမျိုးစေ့,နှင့် sorghum.threshing စင်ကြယ်သောနှုန်းသည်မြင့်မားသည်,ကြေကွဲနှုန်းသည်အလွန်နိမ့်သည်,အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် 1%
5.၎င်းသည်ဂျုံခြွေလှေ့စက်ဖြစ်သည် သိပ္ပံအကယ်ဒမီအတွက် Millet နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လယ်သမားများအတွက်ကောင်းသောအထောက်အမကိုလေ့လာခဲ့သည်
VTX-600 VTX-800 VTX-1000
500~ 600 800~ 1000 1000~ 1500
3kw / 4hp 7.5/12hp 11kw / 15hp
15kw / 22hp
လျှပ်စစ်မော်တာ / ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် / ဒီဇယ်အင်ဂျင်
900*600*1150 1340*1450*1380 2300*1600*15550
70 210 280